Wararka - Bigfish Bio-tech Co., Ltd. waxay kaqeyb gashay shirkii 10aad ee Madasha Caalamiga ee caawinta tignoolojiga taranka
Bigfish Bio-tech Co., Ltd. waxay kaqeyb gashay shirkii 10aad ee Caalamiga ee looga hadlay teknolojiyadda taranka
Shirka 10aad ee Caalamiga ah ee ku saabsan teknolojiyadda taranka, oo ay maalgelisay xarunta bacriminta ee rajada cusub, Ururka Caafimaadka ee Zhejiang iyo Machadka Caafimaadka ee Zhejiang Yangtze River Delta ee Sayniska Caafimaadka iyo teknolojiyada, oo ay martigalisay Isbitaalka Dadka ee Gobolka Zhejiang, ayaa lagu qabtay Hangzhou laga bilaabo Juun 16 ilaa 17, 2018 Hiddaha taranka iyo embriyaha iyo qaybaha kale si loo fuliyo casharrada tacliimeed ee ugu hooseeya iyo doodaha.
Maaddaama uu yahay soo-bandhigaha kulankaan, Bigfish Bio-tech Co., Ltd. wuxuu kaga qaybgalay bandhigga aalado iskiis u horumarsan, sida qalabka baaritaanka hidda-wadaha gacanta, biibiile, qalabka electrophoresis iyo qalabka soo saarista nukleerka nukliyeerka otomaatigga ah, iyo is-weydaarsi qoto dheer khabiiro warshadeed oo ka kooban dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada kana qayb galaya madasha. Khubaradu waxay ammaaneen qalabka iskiis u soo saaray Bigfish, waxayna sidoo kale soo bandhigeen talooyin badan oo qiimo leh oo ku saabsan hagaajinta.
Intii lagu guda jiray kulanka, Bigfish Bio-tech Co., Ltd. waxay gaadhay ujeedo wadashaqayn ballaadhan oo lala yeelanayo Xarunta Taranka ee New Hope ee Maraykanka iyo khabiirka caanka ah ee IVF Dr. Zhang Jin si loo fuliyo ogaanshaha hiddo-wadaha uur-ku-jirka ah ee aan-duuliyaha lahayn, PCR dijitaalka ah iyo tan xigta -dabinta hiddo-wadaagga iyo qaybaha cilmiga noolaha. Labada dhinac waxay ka wada shaqeyn doonaan sameynta shaybaar wadajir ah oo ku yaal Mareykanka iyo isku dhafka ilaha jaamacadda Zhejiang ee cilmi baarista la xiriirta.
Dib u eegista goobta bandhigga, kaqeybgalayaashu waxay booqdeen alaabada la caawiyay ee tignoolojiyada taranka ee ay keeneen shirkado kaladuwan ka dib fasaxii shaaha. Dood xiiso badan oo wanaagsan ayaa la qabtay. Waxyaabaha shirkadda R&D ee madax-bannaan ayaa soo jiitay dareen badan.